AutoCAD WS, sida ugu fiican ee loo yaqaan AutoDesk ee shabakadda - Geofumadas
Disember, 2010 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub
AutoCAD WS waa magaca uu mashruuca Kombiyuutarka ka soo degay, ka dib markii uu bilowday AutoDesk iskuday badan Haddii aan rabo in aan dhexgalo webka, waxaan soo iibsan lahaa shirkadda isweydaarsiga ee Sequoia-Backed, kaas oo la shaqeynayey PlanPlatform si ay ula falgalaan faylasha dxf / dwg via webka.
Waa mid ka mid ah codsiyada ugu muhiimsan ee AutoDesk, gaar ahaan loogu talagalay isticmaalka badan ee isticmaalka in ay ku yeelan karaan nidaamyada kala duwan ee hawlgalka in ilaa hadda la xadiday by Windows. Tani, isticmaale Linux ayaa awood u yeelan doona inuu arko ama wax ka beddelo faylka dwg, isticmaale Mac ah iyo qalabka moobiilka.
Dhowr bilood ka hor version version ayaa la sii daayay iyadoo la adeegsanayo App Store, kaas oo u oggolaanaya in uu orodka ku shaqeeyo AutoCAD WS on Iphone iyo Ipad tablet. Ma ahan wax xun, haddii aan tixgelinno in ay xor u tahay xitaa awooddeeda ayaa weli ah asaasi waxaana ay ka hooseysaa inta websaydhka ah ee horay u lahaa horumar weyn.
Aan aragno waxa muuqaalkoodu yahay AutoCAD WS ee loogu talagalay mobile.
Eeg faylasha dwg / dxf. Waxaad arki kartaa faylalka ilaa 2010, kaliya oo qaata amaahda. Ipad waxay u baahan tahay in la yeesho koonto, waxa ugu fiicani waa inaan faylka la wadaago waqti dheer ka hor tan iyo markii loo yaqaan "Butterfly", iyo markii aan isticmaalay magacayga / lambarkayga -in aan xitaa xusuusto- Waan arki karnaa in wali uu jiro woxoogaa qoraallo ah oo dadka kale ay u sameeyeen isaga.
Waxaa sidoo kale jira tusaalooyin tijaabo ah oo la soo dejin karo:
Diyaarad heer sare ah
Sawir farsameed ah
Tusaale ahaan magaaleynta leh muuqaalka geospatial
Qoraalka aasaasiga ah Ku dhawaad ​​waxa noocan ah mobile version waa redline, inkasta oo ay suurtagal tahay in halkan ay ka badan tahay qalabka online.
Heerka dhismaha waxaad ku dhejin kartaa xariijinta, jilicsanaanta, goobada, leyliska iyo qoraalka; oo dhan oo leh dhexdhexaad fudud oo isku-dhafan.
Heerka edebta, taabashada shay wuxuu u dhaqaajiyaa guuritaanka, miisaanka, rogaa oo tirtiraa amarrada.
Waxa kale oo aad qaadi kartaa cabbiraad oo aad ku sharaxi kartaa daruurta, leydiinka, khadadka lacag la'aanta ah iyo sanduuqa qoraalka.
Marka la eego aragti-gelinta, hadda waxaad haysataa laba ikhtiyaar, oo leh midabada iyo jaale-idamka. Naqshadda webka waxay taageertaa aragtida qaabka, oo la mid ah waraaqaha.
Waxay leedahay palette midab leh oo mid ka mid ah u kala dooranayo xulashada 10, ma jiro wax xakameynaya heerarka ama qaababka laynka.
Naqshadda webkani waa mid aad u sarreeya, badankeeda dhismaha aasaasiga ah iyo kuwa wax laga beddelayo (trim, offset, array, riwaayad, iwm.) Horeba waa la heli karaa. Ayadoo ay ka mid tahay xakamaynta lakabyada, qaababka laynka, qaabka xuduudaha iyo dabacsanaanta.
Waxa kale oo ay taageertaa loading Google Khariidadaha Khariidadaha, kaas oo aan u malaynayo inay ku siin doonto fursado badan. Download waxaa la samayn karaa adigoo dooranaya qaabka, kuwaas oo noqon kara R14, 2000, 2004, 2007, 2010 ama sida .zip oo la tixraacayo tixraacyada.
Tani waxay fulin kartaa dadka isticmaala WindowsMobile leh kiniin kasta, si ay u shaqeeyaan internetka. Noocka offline-ka ayaa dib loo dhigay, ugu yaraan Ipad version, sidaa daraadeed dadka isticmaalaya dhagaxan rosette waa inay sugaan sabir, sababtoo ah dhibaatada ay Adobe u keentay Apple ma oggola ipad in uu ordo, - waa mid been ah
La wadaag Tani waa arrin aad u soo jiidasho leh, inkastoo aan u maleynayo inay yar yihiin waayo-aragnimadooda. Autodesk waxay damaanad qaadeysaa in uu leeyahay sir ah, oo laga yaabo inuu albaabka u furo shaqooyinka iskaashiga iyada oo aan cabsi laga qabin inuu lumiyo jidka. Waa mid xiiso leh mid ka mid ah tabsiyada in jadwalku uu muujiyo, iyada oo isbedelada kala duwan ee faylka uu lahaa.
Wixii hadda ee version mobile ayaa hore u dhisay Dropbox, beddel wanaagsan oo loogu talagalay kaydinta daruuraha. Waxyeello ma laha in la sugo laga bilaabo blog, sababtoo ah waxay ku dhawaaqayaan warka.
Si aad u gudbiso faylasha, waxaad ka samayn kartaa bogga internetka, ama ka soo xirashada AutoCAD plugin kaas oo aad adigu sidoo kale u xoqaysid qalab mobile ah.
Fikradayda, waxa ugu fiican ee aan u arko casriyeynta AutoDesk ee shabakadda, inkastoo aanan wali ogeyn haddii AutoDesk ay ku dallacayso qalabkan mustaqbalka, oo ku saleysan taas. Tallaabo weyn oo ku saabsan isdhexgalka daruuraha, iyo wax badan oo ka shaqeynaya iskuduwidda Bentley horay ula jirtay Project Wise WEL, inkasta oo taasi ay tahay meesha Navigator version Waxay qaadataa faa'iido la'aanta in weli ay tahay macaamil.
Tag AutoCAD WS
Download AutoCAD WS ee Ipad
Post Previous«Previous Kooxda wanaagsan ee Ipad ah
Post Next Hantida 2010Next »